Vista's Colorful Planet: Kindle
4shared.com မှာ Ebook တွေ အတော်များများ ရှာလို့ရတယ်။ ဖရီး။ :D
အဲကယူတာတွေလေ ခွိ။ တချို့pdf တွေ ကျတော့ kindle ပေါ်တင်လိုက်ရင် စာလုံးသေးသွားတယ် Kindle version ပဲ ကောင်းတယ်။
ဗစ်တို့ သိတ်ခေတ်မှီ တယ်.....သူ့ကောင်းတဲ့ အချက်က ကွန်ပြူတာလို မျက်လုံးမစူးဘူး။ wifi ပါတဲ့ဟာလဲရှိတယ် သိပ်တော့မလိုပါဘူး။
Yes, Ken Follett isawelsh author from Cardiff. I read "the key to Rebecca" some years ago. Apparently, his wife resigned in this 2010 from MP (member of parliament) after the scandal of overuse of public fund.
တို့ကတော့ Nook Color လေးနဲ့ ဖတ်နေတယ်။ အခုတော့ Dan Brown ရဲ့ Digital Fortress စဖတ်နေတယ်။ အီကြာကွေး စာအုပ်တွေလဲ ထည့်ပြီး ရုံးသွား ရုံးပြန်ဖတ်နေတယ်။ :D
Kindle လေး.. ညီမလေးတယောက်နားမှာ တွေ့ဖူးတယ်... စာဖတ်ဖို့ တော်တော်လေး အထောက်အကူပြုတဲ့ ပစ္စည်းလေးပါပဲ...။
ကိုယ်ကတော့ အခုလောလောဆယ် ဖုန်းထဲမှာ iBook ကနေ ဒေါင်းလို့ရတဲ့ Winnie the Pooh ဖတ်နေတယ်...
စာဖတ်ရင် အိပ်ပျော်သွားတတ်လို့ မဖတ်တာကြာပါပြီကွယ်...
အိပ်ဆေးလေ ကိုကြီးကျောက်ရဲ့အိပ်မပျော်ရင် စာအုပ်ကိုင်လိုက်ပေါ့ ဟိ
ဗစ်ကို အထင်ကြီးတဲ့ အချက်က အဲလိုစာအုပ်ကောင်းတွေ ဖတ်တာပဲ။ တချို့က အနှစ်သာရမရှိတဲ့ ဘလော့တွေမှာ လည်ပတ်ပျော်မွေ့နေတာ အံ့ဩစရာ
ကျနော် အခု Kindle E-Book Reader ၀ယ်မလို့ စိတ်ကူးတယ်။ Kindle မှာ ဇော်ဂျီ၊ အခြားမြန်မာ ဖွန့်တွေ နဲ့ ပါတဲ့ PDF တွေ ဖတ်လို့ ရမရ၊ သိချင် ပါတယ်။ သုံးဖူးတဲ့ သူရှိရင် တစ်ချက်လောက်ဖြေပေးပါ ခင်ဗျား။